स्वास्थ्य प्रवक्ता भन्छन्- टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेरेपछि को विपन्न हो, को होइन भन्ने थाहा भइहाल्छ नि! :: विवेक राई :: Setopati
सरकारी अस्पतालले लिन थाले कोरोना उपचारको शुल्क
अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेबापत् धमाधम शुल्क असुल्न थालेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै अस्पतालहरूले संक्रमितबाटै शुल्क असुल्न थालेको हुन्।
महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालले पनि संक्रमितबाट शुल्क लिन सुरू गरेको छ। अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सविन थपलियाले भने, 'नयाँ भर्ना हुनेहरूलाई त शुल्क लाग्छ नै तर पहिल्यै भर्ना भएर उपचाररत् संक्रमितको पनि आजबाट लागू हुने गरी शुल्क लाग्छ।'
उनले संक्रमितले उपचार गरेबापत् कति शुल्क तिर्नु पर्ने भन्ने टुंगो नलागेको भन्दै तत्काललाई सरकारले तोकेकै शुल्कमा उपचार गरिने जनाए।
'अहिलेलाई सरकारले तोकेकै शुल्कमा उपचार गर्ने निर्णय भएको छ। पछि आवश्यकता अनुसार घटाउन वा बढाउन सकिन्छ,' डा. थपलियाले भने।
सरकारले सामान्य अवस्थादेखि जटिल अवस्थाका संक्रमितकोहरूको उपचार शुल्क तोकेको छ। जसमा जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार गरेबापत् अधिक्तम प्रतिदिन १५ हजार लिन पाउने भनिएको छ। तर निजी अस्पतालहरूले भने यसअघि पनि सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न नसकिने भन्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका थिए।
डा. थपलियाले सरकारले शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि यसअघि भर्ना भएका तर पैसा नभएका संक्रमितहरूको हकमा भने सरकारसँग समन्वय गरेर उपचार अगाडि बढाइने बताए। उनले भने, 'यसै पनि टिचिङमा कम पैसा हुने बिरामीहरू आउँछन्। अब कुनै बिरामी आइसियूमा सिकिस्त छ र तर उसँग पैसा छैन भने के गर्ने? त्यसैले सरकारसँग समन्वय गरेर कसरी सेवा दिने भने छलफल हुँदैछ।'
सरकारले विपन्न वर्गको भने नि:शुल्क नै उपचार गर्ने जनाएको छ। डा. थपलिया भन्छन्, 'विपन्न वर्गको मानिस हो कि हैन भनेर छुट्याउने अस्पतालमा छुट्टै शाखा छ। उक्त शाखाले सरकारी कागजात हेरेर विपन्न प्रमाणित गरेपछि त्यस्ता संक्रमितको नि:शुल्क नै उपचार गर्छौं।'
उनले अस्पतालमा बेड भरिएका कारण तत्काल नयाँ संक्रमितहरूको हकमा आर्थिक समस्या नआए पनि पहिल्यै भर्ना भएका संक्रमितहरूको हकमा भने पैसा नभएको अवस्थामा कसरी उपचार अगाडि बढाउने भन्ने अस्पतालले निर्णय गर्ने जनाए।
पैसा नभएकै अवस्थामा संक्रमितको उपचार नरोकिने डा. थपलियाले दाबी गरे।
'उपचार पाइरहेका बिरामीहरूलाई हिजो पैसा पर्दैनथ्यो तर आजबाट पर्छ भने हामी पठाउँदैनौं। उहाँहरूको उपचार रोक्दैनौं,' उनले भने।
वीर अस्पतालले पनि मंगलबारबाट भर्ना हुने संक्रमितहरूको शुल्क लिने तयारी गरेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले भने, 'म आज पनि मन्त्रालय गएको थिएँ। तपाईंहरूले शुल्क लिन सुरू गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ। अब भोलिबाटै सुरू गर्नुपर्ला।'
अस्पतालमा अहिले १ सय ३० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। जसमा १५ जना भन्दा बढी आइसियूमा छन्।
निर्देशक सेन्चुरीले संक्रमितहरूबाट अहिलेलाई सरकारले तोकेकै शुल्क लिने जनाए। साथै विपन्न वर्गको भने सरकारले भनेझैं नि:शुल्क उपचार हुने उनले बताए। त्यसका लागि संक्रमितले आफू विपन्न रहेको सिफारिस ल्याउनु पर्ने र त्यसको आधारमा अस्पतालको सामाजिक इकाइले सिफारिस गरेपछि उपचार गरिने उनी बताउँछन्।
'पहिलेदेखि नै विपन्नहरूको नि:शुल्क नै उपचार हुँदै आइरहेको हो। त्यसैले त्यो ठूलो कुरा भएन। हामी पनि त्यो कुरालाई हेर्छौं नि,' निर्देशक सेन्चुरीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले अस्पतालको फारम भरेपछि नि:शुल्क उपचार हुने जनाए।
उनले भने, 'हरेक अस्पतालमा विपन्न वर्गको मापन गर्ने एउटा फारम हुन्छ। त्यसैले कोही त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफू विपन्न हुँ भनेर भन्नुपर्‍यो र फारम भर्नुपर्‍यो।'
उनले १२ वर्षदेखि नै विपिन्नहरूको नि: शुल्क उपचार हुँदै आएकाले यो नौलो कुरा नरहेको बताए। उनले २६ वटा जिल्लालाई त विपन्नको प्रमाणपत्र नै दिइसकिएको पनि जानकारी दिए।
कुनै पनि संक्रमित विपन्न हो वा होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो नहुने दाबी गरे। प्रवक्ता गौतमले भने, 'मान्छेको टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेरेपछि को विपन्न हो र होइन भन्ने थाहा भइहाल्छ नि!'
सरकारले यसअघि कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्दै आए पनि अब संक्रमितको उपचार गर्ने कदमबाट पछि हटेको छ।
अब सरकारले विपन्न वर्ग, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, जोखिममा काम गर्ने, सरसफाइ कर्मचारी र अशक्त संक्रमितहरूको मात्र नि:शुल्क उपचार गर्ने भएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, ०८:१०:००